Ukukopisha okuqukethwe akulungile | Martech Zone
Ukukopisha okuqukethwe akulungile
NgoLwesithathu, Juni 8, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Okokuqala ukuzikhulula kwami: Nginguye hhayi ummeli. Njengoba ngingeyena ummeli, ngizobhala lokhu okuthunyelwe njengombono. Ku-LinkedIn, a ingxoxo iqale ngombuzo olandelayo:
Kusemthethweni yini ukuphinda uthumele ama-athikili nokunye okuqukethwe engikuthola kufundisa kubhulogi yami (yebo kunikezwa udumo kumbhali wangempela) noma kufanele ngikhulume nombhali kuqala…
Kukhona impendulo elula kulokhu kepha ngidunyazwe ngokuphelele yimpendulo yabantu abaningi engxoxweni. Iningi labantu liphendule ngezeluleko okungukuthi, impela, zomthetho ukuphinda uthumele izindatshana noma okuqukethwe abakutholile kufundisa kubhulogi yabo. Thumela izihloko? okuqukethwe? Ngaphandle kwemvume? Ingabe ungamantongomane?
Impikiswano yezomthetho iyaqhubeka kulokho okubandakanya ukusetshenziswa okulungile nokuthi i-copyright iyivikela kangakanani inkampani noma umuntu uma okuqukethwe kwakho kutholakala kwenye indawo. Njengomuntu obhala ithani lokuqukethwe, ngingakutshela ukuthi akulungile. Angishongo ukuthi bekungekho emthethweni… ngathi bekungavumelekile okungalungile.
Kuyamangalisa ukuthi, I-Tynt inginikeza izibalo ukuthi okuqukethwe kwami ​​kukopishwa izikhathi ezingaphezu kwezingu-100 ngosuku izivakashi. Izikhathi eziyi-100 ngosuku !!! Lokho okuqukethwe kusatshalaliswa kaningi nge-imeyili… kepha okunye kwakho kukufaka kumasayithi wabanye abantu. Okunye okuqukethwe amasampula ekhodi - mhlawumbe akwenze abe amaphrojekthi wewebhu.
Ingabe ngithumela uqobo okuqukethwe? Yebo… kodwa njalo ngemvume noma ngokulandela inqubomgomo yesayithi edale okuqukethwe. Ngicela uqaphele ukuthi angishongo isenzo. Ukuphonsa i-backlink kokuqukethwe okuthumele akuyona imvume… imvume kufanele uyinikeze ngokucacile. Ngivame ukuba nezinkampani zobuchwepheshe bokumaketha zingibeke endaweni yami yesikhulumi noma isoftware… kunokuba ngenze umsebenzi onzima wokubhala isibuyekezo esigcwele, ngivame ukubacela amaphuzu avelele abangathanda ukuwenza abe okuthunyelwe. Bayabanikeza… ngemvume ebonakalisiwe yokuyishicilela.
Ngaphandle kwelungelo lobunikazi, ngivame ukwenza iphutha ngokusebenzisa i-Creative Commons. Ama-Creative commons ichaza ngokusobala ukuthi umsebenzi wesayithi ungakopishwa ngesichasiso kuphela, ngaphandle kwesichasiso, noma ngabe udinga imvume eyengeziwe.
Esikhathini lapho wonke amabhizinisi eba ngumshicileli wokuqukethwe, isilingo sokukopisha nokunamathisela okuthunyelwe ngokuqukethwe komunye umuntu sinamandla. Ukuhamba okuyingozi, nokho, okuya kuba yingozi ngosuku (vele ubuze ama-blogger asolwa ngawo Kulungile). Akunandaba noma ngabe amacala avumelekile yini noma cha… ukuhudulela isinqe sakho enkantolo futhi nokucela ummeli ozokuvikela kudla isikhathi futhi kuyabiza.
Kugweme ngokubhala okuqukethwe kwakho. Akuyona nje into ephephile ukuyenza, futhi kuyinto enhle ukuyenza. Sitshale isikhathi esiningi nemizamo ekwakheni amasayithi ethu (njengezinkampani eziningi). Ukuthi okuqukethwe kwakho kuphakanyisiwe futhi kwethulwe kwenye indawo ethile ... kudonsela ukunakwa futhi kwesinye isikhathi ngisho nemali engenayo… kumane nje kube sobala.
isithombe: Izithombe zeBart Simpson Chalkboard - Isithombe
Iso elimnyama leGoogle Panda
UJun 9, 2011 ngo-4: 45 AM
Mfowethu uqinisile impela emlandweni wonke ngokungeyikho. Akulungile futhi kuvinjelwe i-bordernline kwezinye izimo. Ngifunde ezinye izindawo ukuthi i-10 kuye ku-20% ilungile ngesixhumanisi sesikweletu +, futhi konke kuya ngomongo. Ukubhuqa, "ama-collages" nolunye uhlobo lwezinto luthambisa kancane.
Kepha kufanele ngisho ukuthi imvume idingeka kuphela uma "uthumela" yonke into noma ingxenye enkulu yayo.
Isibonelo, uma ngibhala ucezu ezinkundleni zokuxhumana futhi ngifuna ukukucaphuna, Douglas Karr futhi engikuthumelayo kungamagama ayi-600 - 1200 ayisibonelo ... futhi ngifuna ukusebenzisa isaphulelo esivela kokunye kokuthunyelwe kwakho ngizosebenzisa isilinganiso futhi nginikeze izimfanelo ngaphandle kokucela imvume.
Ngemuva kwakho konke ukuthumele ku-inthanethi futhi ngenxa yalokho manje usungumuntu “osesidlangalaleni” futhi uma bekufanele ngicele imvume kunoma ngubani engimcaphulayo, ukuthumela okuthile kungavele kube yinto engenakwenzeka — abanye abantu bathatha izinsuku, amasonto noma bangaze baphendule. Kepha qaphela ingxenye emayelana nenani lamagama… Ukucaphuna kungaba umusho o-1… 2 ubukhulu ngakho-ke kungaba umusho o-1 mhlawumbe emishweni eyi-100 - 200.
futhi… angiyena ummeli noma yini ngakho lokhu kunjalo, kakhulu owami umbono.
UJun 9, 2011 ngo-10: 12 AM
Futhi akulungile ukwenza ama-mashups we-OPC (okuqukethwe kwabanye abantu). Impahla yengqondo noma umbono ovikelwe. Hhayi amagama kuphela. Cha…
Jun 9, 2011 ku-2: 29 PM
Ngiyavuma. Ikakhulukazi uma iwebhusayithi ye-mashup, noma i-athikili kungama-mashups.
Jun 12, 2011 ku-10: 32 PM
Uzizwa kanjani ngezingcaphuno? Ngivame ukudonsa isigaba kusuka kubhulogi engikuthola kuthakazelisa noma kuyakhuthaza njengesisekelo sendatshana entsha. Ngihlala ngifaka izixhumanisi zangemuva nekhredithi.
Jun 13, 2011 ku-7: 16 PM
Akuyona indlela engizizwa ngayo ngabo, uLorraine… yindlela umnikazi wesayithi azizwa ngayo. Izingcaphuno zisakopisha okuqukethwe - akunandaba ukuthi kuncane kangakanani okubalulekile. Abaxhasi bangathi isifinyezo 'ukusetshenziswa okulungile' uma wenza izinto ezifana nokufundisa abanye. Kodwa-ke, labo bethu abane-blog eyakha umkhiqizo wethu nebhizinisi lethu bayazuza ngalezo zingcaphuno. Noma lokho kungaqondile, ungazithola umangalelwa.
Jun 13, 2011 ku-8: 14 PM
Ngicabanga ukuthi ingcaphuno ihlala isetshenziswa ngokufanele. Inkinga ukuthi abantu basebenzisa kabi futhi bahlukumeza wonke umqondo wokusetshenziswa okulungile. Umbuzo wokuthi isicashunwa siyini nokuthi sichaza kanjani ukuthi yini ebaluleke lapha.
Ukusetshenziswa okulungile kuchazwe kahle futhi kufanele ufunde ukuthi ukusetshenziswa okulungile kuthi kuyini. Kuchazwe kahle lapha: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Kunezindlela zobuchwepheshe zomnikazi wesayithi zokunikeza ingcaphuno, futhi uma umbhali ekuhlinzeka lokho ngokusebenzisa okuphakelayo kwabo ngokwesibonelo, kuyaqondakala ukuthi lena * yingcaphuno * akusikho kithi njengama-blogger ukuthi "bakhethe futhi bakhethe" yisiphi isigaba esifuna ukusisebenzisa njengengcaphuno.
Uma ingcaphuno ingachazwa, ngicabanga ukuthi kulungile ukusebenzisa isaphulelo esivela ku-athikili ukunikeza umongo ekubhalweni kwakho nokunikeza isixhumanisi. Vele uqiniseke ukuthi i-athikili yakho ingeyangempela futhi ukucaphuna / ingcaphuno ikhona lapho ukwenza iphuzu noma ukucaphuna umuntu. Kumele kube yingxenye encane ye-athikili ngakho-ke ayikopeli noma imane iphindaphindwe, kepha kufanele iwele ekuhlelweni, ekuhlolweni, ekubumbeni nasekuthandweni.
Kubuyela njalo ebuningini bamagama asetshenziswayo avela ku-athikili yokuqala nokuthi ubhala malini ngempela ongeza inani engxoxweni noma esihlokweni? Noma umane nje uyabhala kabusha okushiwo omunye umuntu futhi ingabe i-athikili yakho isuselwe ngokuphelele futhi icishe ngokuphelele kulokho kubhalwa? uma ungangezi inani, ngizokubuza ukuthi wenzani. Uma ungakolunye uhlangothi, ucaphuna umuntu noma i-athikili yakhe ukusekela umbono wakho ngokwesibonelo bese ukulandela. Kuzoletha ukuvezwa okuningi ku-athikili yokuqala futhi uma i-blogger okukhulunywa ngayo ikuyo yokwenza imali ngokubhala kwabo, lokhu kuzosiza kuphela.
Jun 13, 2011 ku-8: 28 PM
Uphonsela inselelo iphuzu lakho siqu, Oscar… nokusekela elami. Okusemqoka odabeni ukuthi ASIKHO isidingo esithile esiqinisekisa noma esiphikisayo ukuthi empeleni “ukusetshenziswa okulungile” kuyini. Inani lamagama alihlangene nakancane nalo (Bona: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IPUma umangalelwa… uya enkantolo futhi kulapho kunqunywa khona. Ngaleso sikhathi, ukuqagela kwami ​​ukuthi usuvele uchithe isikhathi esiningi futhi mhlawumbe nemali. Yizwi lami lesixwayiso lelo - ama-blogger kumele aqaphele.
Jun 15, 2011 ku-12: 35 PM
Njengonjiniyela, ngibona ngale ndlela kaningi ngamabhulogi wonjiniyela. Abathuthukisi bazokhipha ikhodi esizeni esinjengeMicrosoft Developer Network (MSDN), bayifaka kokuthunyelwe kwabo, behluleke ukunikeza inkomba yokuthi lo mthombo uvelaphi bese bephawula ngekhodi njengokungathi ngeyabo. Ngenkathi bengachazi ngokusobala ukuthi kungumsebenzi woqobo, ababeki nomsebenzi futhi. Lokhu kukushiya nombono wokuthi kuwumsebenzi wokuqala futhi bayigunya kulolo daba.
Konke lokhu okuqukethwe kubuyela ngempela kulokho sonke esikufundile, noma obekufanele ngabe sikufundile, esikoleni esiphakeme mayelana nokucaphuna omunye umsebenzi nokukopela. Yize kungabonakala kungenabungozi kwabaningi, akulungile. Noma ngabe iphosta ithola imvume yokuthumela kabusha okuqukethwe, basenesibopho sokusho umthombo wabo.
Aug 29, 2011 ngo-7: 45 PM
Funda i-athikili yakho ngentshisekelo enkulu, ngicabanga ukuthi iningi lethu linecala lokuthumela / lokushicilela imvume yomnikazi yokuqukethwe okune-copyright.
I-BTW, uzibuza nje, uyitholile yini imvume yokuthumela umfanekiso kaBart Simpson?
Aug 29, 2011 ngo-9: 23 PM
Yebo, uzobona ireferensi yomfanekiso onyaweni - isetshenziswe ngemvume inqobo nje uma bekukhona ireferensi endatshaneni ebuyele kusayithi labo. 🙂
I-Oct 31, i-2011 ku-8: i-09 PM
Isibuyekezo esisodwa kulokhu - kubonakala sengathi i-Righthaven kungenzeka iphelelwe yibhizinisi kungekudala. Ukusebenza kabi kwabezindaba nokusebenza kabi kwenkantolo kubenza ngokubonga!
Okthoba 31, 2013 ngo-4: 57 AM
Nginentshisekelo yokwazi, uma ngabe okuqukethwe kukopishwe kusuka kwenye ibhulogi kuya kuwebhusayithi. . . futhi i-blogger bese icasulwa, icele ukuthi okuqukethwe kususwe. . . okuqukethwe kuyasuswa ngokushesha KANYE nokuthunyelwa ukuxolisa. . . Ngabe i-blogger ke inelungelo lokubeka amacala?
Ngiyabonga futhi ngibheke phambili ekubuyiseleni emuva kusuka kuwe
Okthoba 31, 2013 ngo-9: 35 AM
Yebo, uKelsey. Ukweba okuqukethwe ukweba, ukuxolisa ngemuva kokubanjwa akulishintshi iqiniso. Lokho kusho - angikaze ngilandele ukulandela noma ngubani ngokusemthethweni ngemuva kokuthi ayisuse.